Diyaargarowga Nooca Bilaabashadu Diyaar ma u tahay CES? Liiska Hubinta ee Astaamaha Aasaasiga ah ee Muddada Koowaad | Martech Zone
Hubi inaad ka maqashay sheekooyinka jiidaha hore oo aad xitaa dhageysatay digniinta saaxiibbada iyo asxaabta waxtarka leh. Laakiin haddii aad ka mid tahay kumanaan kun oo ganacsadeyaal ah oo u diiwaangashan inay ka soo qayb galaan waalida sannadlaha ah ee Janaayo ee loo yaqaan CES (Tusmada Macaamiisha Macaamiisha) ee Las Vegas markii ugu horeysay sanadkan (Janaayo 9-12th), way adkaan kartaa in si dhab ah loo odoroso waxa kugu soo food leh.
Sidee ku saabsan tani: Qiyaas hoolka cabbirka kubbadda cagta ee hoolka leh malaayiin lanyard xiran, farsamooyin ganacsi oo dhar caadi ah dhex mushaaxaya oo ku dhex wareegaya kumanaan waabab iyo miisas u tartamaya in la fiirsado. Bulshooyinka dhexdooda, cod dheer, midabyo midabo leh oo ka socda noocyada adduunka ugu waaweyn - u malee Sony, Samsung, Ford iyo kuwo kaloo badan - waxay u badan tahay inay ka sarreeyaan cuntada, sida 87% soo bandhigayaasha CES waa shirkadaha Fortune 100. Dhanka kale, boqolaal kale ayaa ku mashquuli doona calaamadaha meel kasta oo ay isha ka aragto, laga bilaabo dukaamada musqusha illaa kuwa haysta koobabka kafeega iyo wax kasta oo u dhexeeya.
Hadaad tahay kuwa bilowga ah badankood, mahelaysid faa iidada qafis miisaaniyadeed oo weyn oo kuyaala sagxadda xarunta shirarka (taas oo ku kici karta kor u dhaafaya $ 50K qolka 10 × 10). Haddii aad tahay bilow cusub oo leh miisaaniyad adag, waxaad tixgelin kartaa bedel ka jaban sida Beerta Eureka - meel gaar ah oo loogu talagalay bilowga, miis ku yaal mid ka mid ah bandhigyada warbaahinta ee habeenkii sida Showstoppers, ama xitaa kaydinta qolal mid ka mid ah hudheelada ku dhow xarunta shirka.
Si kastaba ha noqotee, waxa aad awoodid - iyo - waa inaad sameysid uguyaraan waa inaad hubiso astaanta ay tahay inaad muujiso markaad la kulantid qofkasta oo halkaa jooga, ha ahaato qol, miis ama kaliya markaad marayso dabaqa bandhigga, ayaa ka dhigaysa aragtida ugu fiican suurtagal ah
Hoos waxaa ku yaal lafo-qaawan, liistada hubinta aasaasiga ah si loo hubiyo in sumcadda shirkaddaadu ay diyaar u tahay inay la kulanto dadka badan CES sannadkan.
Uma jeedin waallida loo yaqaan CES? Inta badan talooyinka hoos ku xusan waxay khuseeyaan uun wixii ganacsi ganacsi weyn ah ee shirkaddaadu ka qaybgalayso sannadkan. Sida aan wada ogsoonahay, soo bandhigida ama xitaa kaqeybgalka shabakada iskuxirku waa jimicsi qaali ah, sidaa darteed macno kaliya ayaa leh in la kordhiyo joogitaankaaga adoo horay u dhigaya cagahaaga ugu fiican ee ugu fiican.
Qalabka si joogto ah loogu calaamadeeyay astaantaada hoos - Hubso inaad haysato xirfadle, astaan ​​qurux badan iyo tilmaamo summad leh oo loo waafajin karo qayb kasta oo dammaanad ah, dhar, iyo calaamadaha aad rabto inaad abuurto. Astaan ​​caado ah oo loogu talagalay inay ku habboon tahay codsiyo fara badan ayaa kaa caawin doona astaantaada inay istaagto, xitaa dhacdo sida CES ah.
Calaamado casri ah, qaab naqshadeysan oo fidsan oo loogu talagalay codsiyo badan. Naqshadaynta astaanta ee blancetnoire loogu talagalay Lacagta Lacagta.
Cusboonaysii joogitaankaaga internetka - Kahor intaadan ku sugnayn Vegas, hubi in websaydhkaagu casriyeysan yahay (macluumaadka saxda ah iyo kan hadda ee lala xiriirayo, qolka saxaafadda ee daboolida dhow iyo war-saxaafadeedyada, iwm.) Waa fikrad fiican inaad hubiso in marinnadaaga bulshada la cusbooneysiiyey iyo in qof goobta jooga uu kormeerayo isdhexgalka dhammaadka wiigga.
Haddii aad iibinayso alaab casri ah, hal-abuur leh, hubi in websaydhkaagu casriyeysan yahay oo jawaab ka bixin karo. Naqshadeynta websaydhka ee Denise M.
Jadwalka ama Bogga Calaamadaha iyo Waraaqaha - Haddii aad qorsheyneyso inaad ku soo bandhigto miisaska ama shaybaarka miiskaaga, tixgeli inaad sameysid calaamado yar si aad toos ugu jeediso kaqeybgalayaasha iyaga. Ma haysataa nooca beta ee alaabtaada ka-qaybgalayaasha si ay u tijaabiyaan? Ku dar macluumaadkaas halkan. Marabtaa inaad u soo bandhigto kaqeybgalayaasha koodh xayaysiis ah? Maalgasho kaarka boostada ee afar-midab ee xirfad-yaqaan loogu talagalay warbaahinta iyo kuwa kale si aad uga qaadatid qolkaaga si aanad u waayin hoggaankaas.
Calaamadaha - Markay tahay calaamadaha, hubi inaad baratid cabirka ay tahay inaad ku shaqeysato miiska gaarka ah ama qolka aad keydisay. Waxay u egtahay inaad la shaqeyneyso meel aad u yar oo aadan yeelan doonin gidaar aad ku dhejiso banner. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad ka soo qaadatid boorar bilaash ah. Qaar ka mid ah ilaha la awoodi karo ee kuwan: Calaamadaha degdegga ah iyo Muujiya2go. Markaad abuureysid calaamadahaaga, iska caabi rabitaanka inaad ku riixdo qiime kasta oo shirkaddaada ku saabsan meesha la daabacayo sida ugu macquulsan; astaantaada iyo astaan ​​fudud oo xusuus mudan oo meel fog laga akhrin karo ayaa si fiican u shaqeysa.
Bixinta - Bixinta wax-soo-saarka ayaa ah fursaddaada inaad wax abuurto. Tixgeli waxa dadku rabaan iyo inta badan ay u baahan yihiin dhacdooyinka nuucaan ah. Maaha inay noqoto mid xariifnimo badan - waxaa lagugu xasuusan doonaa adoo siinaya wax qiimo leh oo ka fakaraya baahida isticmaalaha marka hore. Ka fikir mashiinnada neefta, boorsooyinka si aad u qaadatid swag, ama buugaag yar yar. Waqtigii oo dhammaaday Kuma khaldami kartid nacnaca sida loo jiido qolkaaga.
Muuqaalo muuqaal ah - Haddii aad go'aansato inaad ku muujiso muuqaal fiidiyowgaaga qolkaaga, waxaad u baahan doontaa wax soo jiita dareenka dadka oo aan ku tiirsaneyn codka (maadaama ay u badan tahay inuu hoolka ka yeeri doono). Fiidiyowgaagu waa inuu awood u yeeshaa inuu kaligiis istaago muuqaal ahaan iyo qoraal ahaan. Halkan waxaa ah halka ay tahay inaadan ka baqin inaad hal-abuur yeelato - waxay ku saabsan tahay raadinta habab cusub oo aad ku soo jiidan karto dareenka wadahadallada.
Dharka - Uguyaraan, ujeedadiisu tahay inaad umuuqato xirfad iyo muuqaal. Haddii aad u soo bixi kartid isbarbar dhig, shaah summad leh ama shaati-gacmeedyo loogu talagalay shaqaalahaaga qolkaaga, sidaas samee. Kaliya waxay ka dhigi doontaa waayo-aragnimada leh astaantaada mid la waco oo la xasuusto.
Qalabka Warbaahinta Dijital ah - Isku soo duub xirmadaada warbaahinta ee dhijitaalka ah. Waxaad dooneysaa inay diyaar u ahaato saxafiyiinta sidaa darteed maahan inay sugaan fursadna ha u seegin. Waa inay kujiraan macluumaadka shirkada, kaarkaaga ganacsiga, waxyaabaha alaabta lagu qoro iyo macluumaadka, astaamaha, sawirada, macluumaadka xiriirka, iyo waxkasta oo aad u maleynaysid inuu weriye doonayo. Waa fikrad caqli gal ah in waxaas oo dhan laga helo khadka tooska ah isla markaana lagu daro iskuxirka xirmada xirmadaan kaarkaaga ganacsiga.
Kaararka Ganacsiga - Waan ognahay, waan ognahay… waa 2017 ilaa hadana waxaan kahadleynaa kaararka ganacsiga. Laakiin dhacdooyinka sida CES, calaamadahan umuuqda ee qadiimiga ah ee laga soo gudbay waagii hore waxay wali noqon kartaa habka ugu fiican ee lagu xasuusiyo xiriirada cusub inay isku xirmaan kadib dhacdada (ka dibna si dhakhso leh ugu tuur kaarkaaga ganacsiga qashinka dib u warshadaynta). Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, tixgeli inaad dib u habeyn ku sameyso ka hor bandhigga, oo hubi in qof kasta oo ka soo qayb galaya magaca shirkaddaadu ay leedahay wax badan oo ay dhiibto. Hubso inaad uga tagto kaarka qaar ka mid ah meelaha cadcad si qaataha uu ugu qoro warqad qoraal ah kulankaaga ka dib - adigoo raacaya "ha iloobin inaad email u dirto qofkan!"
Kaar ganacsi oo qaab aan caadi ahayn isku laalaaban, ayaa wuxuu xusuusin doonaa qofkasta magacaaga iyo ganacsigaaga. Naqshadeynta kaarka ganacsiga ee Platinum78 loogu talagalay Dais.
Isku Wada Wada Duuboo
CES waa fursad dahabi ah oo ku saabsan uun nooc kasta oo tikniyoolajiyad macaamiil ah, maxaa yeelay noocyo badan oo ka tirsan qaybtan ayaa ku leh joogitaan xoog leh halkaas. Ka faa'iideyso fursaddaas adigoo runtii u diyaar garoobay munaasabadda. Kaliya wax badan kama heli doontid CES, waxaad sidoo kale ku raaxeysan doontaa shirka wax intaa ka badan.
Tags: 2017labiskacalaamadaha waabwax sumadayntakaararka ganacsigamarkaasdammaanaddasiixirmada warbaahinta dhijitaalka ahjardiinada eurekaabaalgudkalogoweel lacag ahlacagjarWebsite Cusubbogga jawaabta lehbandhigayaalsaxeexcalaamadaha miiskawebsaydhka tiknoolajiyadamuuqaalka fiidiyowgawebsiteshaqaynaya
Jidka Warbaahinta ee Bulshada ee Cimri-dheer ee hoos yimaada GDPR